Sidee baan ku heli karaa dib u celin GOV back PROV?
Qaadashada Dugsi sare ee Pagerank dusha GOV backlinks waxay sare u qaadi kartaa darajooyinkaada boggaaga. Hase yeeshee, si kastaba ha noqotee, in iyaga la qabsado waa hawl culus oo waqti badan qaadata. Iyo, dabcan, dadka qaarkiis ayaa wali ku doodaya in Google uusan dhab ahaantii ula dhaqmin EDU ama GOV backlinks wixii kale duwan. Si kastaba ha ahaatee, qaybta libaaxda ama faa'iidada dhabta ah ee SEO-ga waxay u maleyneysaa mid kale. Waa maxay sababta? Haa, aan ka fekerno in Google uusan aqoonsaneyn wax ka wanaagsan kuwa kale ee caan ku ah (e. g. , dhibic COM, dot Net, ama ORG). Hase yeeshee, qodobka awoodda sare ee GOV backlinks waa in ay siiyaan miisaan iyo awood dheeraad ah, inta badan ka soo jeedda aragtida Search Engine Optimization. Sidaa darteed, adoo iska indha tiraya inaanay jirin wax rasmi ah oo ay bixiso Google weli, muhiimadda ugu sareysa ee GOV backlinks waa in aan marnaba la dayacin.
. Dhab ahaantii, waxaa lagu aqoonsadaa inta badan SEO-ga oo ah qotomiyad qumman oo ah dhisme xooggan oo xoog leh, maaddaama ay caadi ahaan ka soo jeedaan bogagga ugu caansan oo keliya ee la aamini karo.
Sidaas, waxa ku saabsan qiimaha SEO ee dhabta ah ee GOV backlinks? Waa hagaag, ma jiraan wax awood ah oo leh iyaga. Laakiin tani waxay u egtahay in talada yaab leh ay wali dhab tahay ilaa xad. Dabcan, websaytka ama blog kasta ayaa heli kara adigoon ku jirin kuwa dib u celiya si ay ufiiriyaan, oo waliba si fiican ugu fiican Google. Waxaan loola jeedaa haddii aad nasiib u leedahay inaad ku kasbato qaybo dheeraad ah oo GOV backlinks ah, website-kaaga ama blog-kaaga ayaa leh xaqiiqdii ku haboon inaad ku sii jirtaan tartanka,. Sidaa darteed, tixgelinta qiimaha SEO ee halkan waxaa ku imaanaya murugo - waa mid aad u adag in lala xiriiro kordhinta domainka iyo ilaha internetka ee ay leeyihiin dowladu naftooda ama aasaas kasta oo la xiriira. Waxyaabahani waa in aysan marnaba xiriirin cid kale sabab la'aan, ama sabab la'aan.
Sida horayba u sheegay, ka soo kabashada taageerada dawladeed waa shaqo xoog ah oo waqti dheer qaata. Laakiin weli waa wax qiimo leh, maadaama ay markasta si fiican u bixiso - dhab ahaantii way ka fiican tahay wixii kale ee dhab ah, xitaa laga helo bogagga ugu fiican Pagerank ama meelaha ugu sareeya ee maamulka. Marka, ka hor intaanad bilaabin, hubi in aad wax walba meel ku heshay. Waxaan u jeedaa boggaaga hadda jira ama bogga bogga waa in uu ahaado mid wacyi gelin ah, oo ku xiran mawduuca ugu muhiimsan isla markaana wuxuu bixinayaa qiimo weyn dadka maskaxda leh. Intaa waxaa dheer, bogaga shabakadaada waa in si wanaagsan loo qabtaa ee ku saabsan SEO-ka goobta si ay u noqoto mid si fiican u raali gelinaya aasaaskii siyaasadeed iyo goobahooda rasmiga ah.
Ugu horreyntii, hubso in faahfaahinta backlink ee boggaaga internetka ay horay u qabatay qaar ka mid ah PR, PA, iyo xidhiidhada DA. Habkaa, waxaad noqon doontaa mid aad u wanaagsan si aad u hesho kuwa aad u qaali ah. Sidaa daraadeed, ha ilaawin inaad noqoto mid wax-qabadleh xirfadle ah marwalba waa kuu fiicantahay - xitaa marka laga reebo shaqadeena - inaad ka faa'iidaysato awooddaada awooddaada iyo karti-xirfadeedka looga baahan yahay soo jiidashada GOV backlinks, oo laga yaabo inay ka hesho ilaha ugu wanaagsan iyo kalsoonaanta Webka. Waxaad raadineysaa goobaha saxda ah
Marka aad xaqiijisid in wax walba oo ku jira boggaga internetka ama blogku uu jiro, waa wakhti aad ku hesho bogagga internetka ee saxda ah si loo iyadoo leh. Waxyaabahani waa in ay jiraan kordhin domain ah oo dheeraad ah, halkii ay ka ahaan lahaayeen tirada dhabta ah ee asaasiga qaraabada iyo ururada rasmiga ah. Taas macnaheedu waa in aan fogeyn ilaha internetka oo idil ee GOV domains waxay heleen wax walba oo ay sameeyaan dawladaha dhabta ah. Sidaa darteed, raadinta goobaha saxda ah, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso labadaba sharciyadooda. Sidee baan u heli karnaa hay'adaha dhabta ah iyo ilaha kale ee muhiimka ah? Waxaan ku talineynaa in aan raadiyo "bogga:. isbeddelada isbedelka sare si aad u awoodi kartid in aad dejiso xoogaa sax ah.
Faallooyinka ugu sarreeya ee la xidhiidha qoraallada / boggaga internetka
Haa, ka tag faallooyin ku saabsan blogyada iyo bogagga internetka ayaa ah mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee lagu heli karo buundooyinka qiimaha leh ee GOV. Dabcan, si ka duwan sida looga hadlo meel kale oo dib loogu soo celiyo, taasi waxay noqoneysaa hawl badan oo adag. Laakiin wali waa qaabka ugu badan ee loo isticmaalo si loo dhamaystiro hawsha, sidaas darteed waxaan ku talinaynaa in aan isku dayo ka hor inta kale.
Sidaa daraadeed, waxwalba waxa weeye in qaybta libaaxyada ee shabakadaha internetka ama blogsku aysan laheyn meel loogu talagalay faallo toos ah. Haddii ay leeyihiin ikhtiyaar this, si kastaba ha ahaatee, fursadaha faallooyinka ay u badan tahay inay la yimaadaan NoFollow. Waxay ka dhigan tahay inaad bixiso wakhti iyo dadaal si aad u hesho bogga saxda ah ama bogaga blogka ee aan aheyn NoFollow. Inkasta oo ay jirto xaqiiqda ah in fursadaada dhabta ah ee helitaanka dusha sare ee GOV backlinks ay noqon karto mid aad u qosol leh, ka tago faallo waa qiimihiisu. Kaliya hubso in faallayntaadu tahay arrin muhiim ah oo qiimo leh oo ka imanaysa iyadoon isbeelin.
Si aad u hesho fursado fiican oo aad ku heli karto meelaha aad u ogolaato faallooyinka DoFollow, waxaan kugula talinayaa inaad isticmaasho "site:. gov inurl: blog. "Intaa waxaa dheer, marka laga reebo kaliya isku dayga in ay GOV backlinks ka soo comment comments, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa qaar ka mid ah sifooyinka kale. Si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, waxaad u baahan doontaa waxyaabo aad u fiican oo ku qasban. Sidaa daraadeed, aan aragno aragti kooban oo hoos ku xusan.
Wakaaladda Dawladda - qor sheeko tayo leh, si fiican u suuq gee oo ogeysii wakaaladda. Si aan u sharaxno, aynu u maleyneyno inaad shirkad ka shaqeyneyso tamarta dib loo cusboonaysiin karo, ama tusaale ahaan, waxaad tahay qandaraasleeye tamarta tamarta ah. Habkaas, dhammaan waxaad u baahan tahay halkan waa inaad abuurto falanqayn dood ah oo blog la xiriira ama maqaal buuxa oo loogu talagalay Xafiiska Tamarta Cusub iyo Tamarta Tamarta. Calaamada Pro-ga: Bartilmaameedka dhageysiga caalamiga ah waa hab weyn oo loola xiriiri karo hay'adaha dawladda shisheeye.
Siyaasiyiin - sida habkii hore ee qorista maqaal ku saabsan hay'ad dawladeed, waxaad xor u tahay inaad samayso guudmar ama aad wax ka qorto siyaasi caan ah ama qof ka shaqeeya arimo sharci oo la xariira oo saameynaya ganacsigaaga. Ha wiiqin waqtigaada iyo dadaalkaaga qoritaanka ku saabsan rajada laga qabo sharciyada soo socda ee dhawaan la soo jeediyay, tusaale ahaan, taas oo ku xiran mawduucaaga ganacsiga weyn ama qaybaha sare ee ganacsiga. Kaliya sameyso maqaal aad u weyn oo ku xira siyaasadda soo jeedinta ama qofka masuulka ka ah. Ka dib, u sheeg hay'adaha daneynaya inay kuugu qoraan daabacaadda cusub.
Wareysiga Wakaaladda - dooro mowduuc munaasib ah oo wareysi lala yeesho xubin ka mid ah hay'ad degaan. Inta badan, waxaa laguu oggolaan doonaa inaad wareysiga ku qaadato, dabcan waxaa lagaa rabaa in aad heshay mawduuca saxda ah. Habkaas, waxaad awoodi doontaa inaad soo daabacato boggaaga internetka ama blog-ka oo leh xiriir, kaas oo tilmaamaya wakaaladda dawladda. Ogsoonow, in mararka qaarkood qofka la waraystay ama hay'adaha dawladdu ay wadaagaan waraysiga iyaga keligood. Haddii ay sidaas dhacdo, waxaad u badnaan doontaa inaad ku raaxaysato qaar ka mid ah dhibcaha dheeraadka ah ee GOV backlinks, marka laga reebo midka hore.
Samaynta Xiriir Cusub - isku day inaad ku soo dhawaato xiriir dheeraad ah ama iskaashi shuraako dowladeed cusub ayaa sidoo kale noqon karta qaab isku mid ah si aad u hesho gadaal dheeraad ah oo GOV backlinks ah oo leh Pagerank ugu sareeya ee suurtogalka ah. Dabcan, ma ahan mar walba la maareyn karo - sababtoo ah wax walbo halkan waxay si aad ah ugu tiirsanaan doontaa boggaaga internetka ama shabakada internetka. Si kastaba ha noqotee, mararka qaarkood waxay noqotaa fursad macquul ah oo lagu soo dhejiyo xiriir dowladeed oo dheeri ah. Xaalad kasta oo kasta, samaynta war saxaafadeed ayadoo la adeegsanayo garsoore ay hay'addu wali u qalantay tallaal. Taasna, maskaxda ku hay in abuurista iskaashi hay'ad dawladeed sidoo kale waa wax faa'iido leh. Fikrad ahaan, tan waxay u horseedi kartaa boggooda rasmiga ah inay inta badan isku xiraan shabakadda ganacsigaaga weyn ama blog-ga taageeraya.
Ka qayb galka Gaaritaanka - waxaa laga yaabaa inaad sidoo kale ka shaqeyso samaynta bogga khayraadka leh fursado badan, ama isku day inaad hesho liisaska bogagga kheyraadka ee ganacsiga maxalliga ah. Waxaad naftaada abuuri kartaa, tusaale ahaan samaynta deeqda sadaqada si aad ugu qorto kheyraad khaas ah oo leh khadad qiimo leh oo tilmaamaysa boggaaga ama blog-kaaga.
Gawaarida - bogsashada shabakadda dawlada ayaa marwalba kasbatay taageeradaas qaaliga ah. Kaliya wax badan ka ogow dhibcaha ugu daran ee hay'ad dawladeed oo si fudud u samee boostada si aad u sheegto waxa ay rabaan inay maqlaan. Dabcan, ma noqon karto sida loo ballanqaaday si loo kasbado qaar ka mid ah dhibcaha dheeraadka ah ee GOV backlinks, laakiin haddii aad dareento sida saxda ah ee dabcan - nidaamkan si fiican u shaqeeya.
Ugu dambeyn Baadhitaan
Ka dib, waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in dhibcahaaga cusub ee GOV backlinks aysan waxyeello lahayn. Waxaan ula jeedaa in ay ka shakisan tahay Google marka khadkaaga bogga ama blog-ka ee si lama filaan ah uu ula qabsado xiriirro dowladeed oo badan. Sidaas darteed, waxaan kugula talinayaa inaad haysato labajibbaar mar walba oo gadaashaada cusub ee la isticmaalo iyagoo isticmaalaya qalab kasta oo bilaash ah oo online ah oo loogu talagalay dhisidda xiriirka iyo cilmi baarista. Kuwa kale, waxaan ka helay Open Site Explorer, Falanqaynta Naqshadaynta, iyo Qaylo-dhaanta Qodobka sida aadka u faa'iido leh si ay u fuliyaan falanqeyn dhameystiran oo ku saabsan astaanta boggayga Source . Ku dadaal inaad si joogto ah u shaqeyso, nasiib wacan!